သတင်းထူးဗျို့ သိပြီးသားသူတွေကော မသိသေးတဲ့သူတွေလည်း ဖတ်ရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သတင်းထူးဗျို့ သိပြီးသားသူတွေကော မသိသေးတဲ့သူတွေလည်း ဖတ်ရအောင်
သတင်းထူးဗျို့ သိပြီးသားသူတွေကော မသိသေးတဲ့သူတွေလည်း ဖတ်ရအောင်
Posted by thihayarzar on May 31, 2012 in Copy/Paste, News | 30 comments
ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် သပြေချောင်ရွာနေ ဦးလှတင်-ဒေါ်မမြ၏သမီး
မသီတာထွေး(၁၆)နှစ် ကို လွန်ခဲ့သော (၂၈.၅.၂၀ ၁၂) ညနေဘက်(၅) နာရီ ခန့်က
အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တရားခံတဦးကို ဖမ်းဆီးမိထားကြောင်းသိရပါသည်။
မသီတာထွေး ဟာ (၂၉.၅.၂၀၁၂) နေ့ မနက်(၉) နာရီအချိန်တွင်
ချောင်းဝရွာနှင့် ကျောက်ထရံ ရွာကြား ပရဟိတကျောင်း အနောက်ဖက်က
ကာရီဘောင်ဆည် အဟောင်းပေါ်တွင် ဓါးဒါဏ်များနှင့့်  သေဆုံးနေတာ
ဖြစ်စဉ်မှာ “မသီတာထွေး တယောက်တည်းပြန်လာသောအခါ ကုလားများက
လူခြေတိတ်တဲ့နေရာမှ စောင့်နေပြီး ခန္ဓာတွင် ဝတ်ဆင်လာသော ရွှေများကို
လုယက်ပြီး ဗလက္ကာယပြုကျင့်ပြီးနောက် လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်
ခဲ့တယ်’’လို့ ၄င်း အား ရှာဖွေရာတွင် ပါဝင်သော ရွာလူကြီးတယောက် အဆိုအရ
ယခုအခါတွင် မသီတာထွေး ရုပ်အလောင်းကို ကျောက်နီမော်ဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံတွင်
စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရပြီး မသင်္ကာသော ကျောက်ထရံကုလားရွာက ထွက်ပြေးသွားသော
မုဒိန်းကောင်လို့ ယူဆရသော ကုလားတယောက်အား ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့
ကျောက်နီမော်ရဲ စခန်းက အတည်ပြုပြောကြားပါသည်။
“ပျောက်လို့လာတိုင်တော့ ကျွန်တော်တို့လဲ လူငယ်ချင်းချစ်လို့ကြိုက်လို့
လိုက်သွားတယ်လို့ ထင်တာပါ၊ မိုးလင်းလို့ ရွာသားတွေက
အလောင်းတွေ့တယ်လို့ပြောမှ လိုက်သွားလိုက်တာ အခုလို တွေရတယ်’’လို့
တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်မှ ပြောပါသည်။
သူကဆက်လို့ “ဒါ ရိုးရိုးလုယက်မှုမဟုတ်ပါ။ ကျူးလွန်ပြီး
ဗလက္ကာယပြုကျင့်ထားတယ်။ နောက် လူသတ်တယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေက သာမညမဟုတ်ဘူး
တရားခံတွေဟာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သွေး အေးအေး နဲ့ ရက်စက်စွာ သတ်ပြစ်ခဲ့တာ။
လည်ကို လှီးပီးတော့ ညာဖက်ပခုံးမှာ ဓါးခုတ် ရာ ရင်ဘက်တွေ မှာ
ကျောကုန်းတွေမှာ နာရွက်တွေပြတ်နေတယ်။ တရားခံတွေ ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး
သုံးစွဲကြတယ်လို့လဲ ထင်တယ်။ တရားခံ မူဆလင်ကုလားတယောက်ကို တော့
သေဆုံးသွားသော ရခိုင်အမျိုးသမီးမှာ လက်ဝတ်လက်စား ရွှေဆွဲကြိုး ရွှေနားဂပ်
လက်စွပ်များလဲ ပါသွားကြောင်း၊ ဆွေးမျိုးတော်စပ်သူ တယောက်ကလည်း
ရွှေက(၂)ကျပ်သားနီးပါး ရှိကြောင်း ပြောပြပါသည်။
အဆိုပါ လူယက်ပြုကျင့် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျောက်နီမော်မြို့နယ်တဝိုက်မှာ
လူထုအုံကြွမှု ကုလား-ရခိုင်ပြဿနာတွေ မ ကြီးထွားအောင် ရဲစခန်းမှူး မြို့ 
နယ်မှူး ကျောက်ဖြူခရိုင်မှူးများ အားလုံး ရောက်နေပြီးတော့
လုံခြုံရေးတွေလဲ တင်းကျပ်အောင် ချထားကြောင်း သိရပါသည်။
တရားခံကုလား နောက်နှစ်ယောက်ကတော့ ထွက်ပြေးနေတယ်လို့ သိရပြီး
နာမည်မဖေါ်လိုသော ရဲဝန်ထမ်းတယောက်က ဒီကုလားရွာနားမှာ လူယက်မှုတွေ
မကြာမကြာဖြစ်ကြောင်း။ တိုင်လာလျှင်လဲ ငွေနဲ့ ရှင်းပြစ်ကြောင်း။ အခုလဲ
ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ မပြောတတ်ကြောင်း’’လို့ ပြောပါသည်။
http://www.thithtoolwin.com/2012/05/blog-post_4488.html မှ ကူးယူတင်ပြသည် …..
သေဒဏ် မှ သေဒဏ် ဘဲနော်
သေဒဏ်မှ သေဒဏ် ..
ပိုစိုးပက်စက် သေဒဏ် …
ရမ်းဗြဲကျွန်းမှာ ကုလားတွေက အာဏာပိုင်တွေကို ငွေပေးပြီး အမှုတွေ ဖျောက်နေတယ်တဲ့ … အရင်ကလည်း ကျောင်းသူ လေးတွေကို စော်ကားဖူးတယ် … ဒီကောင်တွေ ကောင်းကောင်းမနေပဲ တော်တော်လူပါးဝနေပြီ …… ….
သနားမိတယ်ဗျာ.. မြန်မာပြည်မှာ အဲ့လိုအမှုတွေကို
အမြန်ဆို ငွေနဲ့ လိုက်ပြီး ရှင်းပစ်တဲ့ ဥပဒေတွေ
ပုံလေးကြည့်ပီး ၀ဋ်ကြွေး အမြန်ကျေပါစေ..
ခဏလေးနဲ့သေရင်တောင် ငါကတော့ မကြေနပ်ဘူးကွ။
ခံစားရတဲ့ ရခိုင်တိင်းရင်းသားများဘက်ကိုကြည့်ရင်း စာနာမိပါ၏။
ခံစားရတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဘက်ကိုကြည့်ရင်း စာနာမိပါ၏။
အတတ်နိုင်ဆုံး မျှမျှတတလေးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ကြပါစေ
” တရားခံ ၃ဦးသည် ၄င်းတို့ ကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှု ကို
MP4 ဖြင့် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပြီး ”
အဘ On Line ပေါ်မှာ ဆဲလေ့ ဆဲထ မရှိပါဘူး ၊
ဆဲတာကိုလည်း ထောက်ခံလေ့ မရှိပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ဒီခွေးတွေကတော့ ၊
ပြစ်ပြစ် နှစ်နှစ် ဆဲရေးခြင်းနှင့် ၊
ထိုက်တန်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
မုဒိန်းကျင့် ၊ လူသတ် တာကို ဗီဒီယို ရိုက်ထားတယ်တဲ့ ။
” မုဒိမ်းကျင့် အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီး ၏ နောက်ဆုံး ခရီးမှာ
ရမ်းဗြဲ မြို့ လုံး ကျွတ် ပို့ ဆောင် ”
လူမျိုးခြားသုံးဦး၏ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသော
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့၊ ကျောက်နီမော်မှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်၏ ဈာပနကို
ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ကျောက်နီမော်သုဿန်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ
ဒေသတိုက်နယ်တ၀ှန်းရှိ ဒေသခံအင်အား ၅၀၀၀ ကျော် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြသည့် လူထုတွင် အပျို၊ လူပျို လူငယ်များက အများစုဖြစ်သည် ။
လွမ်းသူပန်းခွေတွင်လည်း တရားခံ ၃ ဦးအား ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများရှေ.တွင်
တရားခံ ၃ဦးသည်၎င်းတို.ကျူးလွန်ခဲ.သော.ပြစ်မှူ.ကို MP4 ဖြင်.မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားပြီး
ထိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောMP4 ကို ရဲများကလက်ဝယ်ထိမ်းသိမ်းထားသည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည် ။
ည ၇း၀၀ နာရီခန်.တွင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးမှ တိုက်နယ်တစ်ခုလုံးမှ ရပ်မိရပ်ဖများနဲ.
By Thanzawlwin Angalchay
ဟုတ်တယ် ၊ စဉ်းစားကြည့်အုန်း ။
၁ ။ မုဒိန်းကျင့်တယ် ။
ကောင်မလေးက ဖြူဖြူ ချောချောလေး ။ အဲဒီ ဘက်မှာ ရှားမယ် ။
OK မပြောလိုသေးဘူး ။
၂ ။ သတ်တယ် ။
အမှုပေါ်မှာစိုးလို့ ။ လည်ပဲ လှီးလှီး ၊ ဓါး နှင့်ပဲထိုးထိုး ၊ သေတာ လိုရင်း ။
၃ ။ နားရွက် နှင့် လက်ဖြတ်တယ် ။
ရွှေငွေ လက်ဝတ် ရတနာ ဖြုတ်ရမလွယ်လို့ ဖြတ်ယူတယ် ။
၄ ။ မိန်းမ ကိုယ် / အင်္ဂါ ကို ဓါးနှင့် မွှန်းတယ် ။
၅ ။ မုဒိန်းကျင့် ၊ လူသတ် တာကို ဗီဒီယိုပါ ရိုက်ထားတယ် ။
၄ နှင့် ၅ ကိုတော့ လုံးဝ လုံးဝ ကို လက်မခံနိုင်ဘူး ။
မဆဲ ဘယ်သူ နေပါ့မယ် ။
( အဘ ၊ ဘယ် ဘာသာဝင်ကို ပြောရမယ်လို့ ၊ မရေး မပြောပါဘူး )
မှန်ပါ့။ အသေအချာ အလေးအနက်ကို စီစစ်ပြီး တရားစီရင်ရေး ဥပဒေက အပြစ်ဒဏ်ပေးသင့်တယ်။
ဒါဟာ လောဘ ဒေါသကြောင့် သတ်တဲ့လူသတ်မှု ရိုးရိုး မဟုတ်ပါ။ လူမဆန်အောင် လူ့အသက် လူ့အရှက် လူ့သိက္ခာ ကို စော်ကားတာ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီး (သို့ ) ၀န်ကြီးချုပ်က ပါ တရားဥပဒေ ရဲ့ သိက္ခာ ။ မတရားခံရသူရဲ့ အသက် အရှက်နဲ့ သိက္ခာအတွက် အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး အပြစ်ဒဏ်ချပေးပါ။ ဖမ်းထားတယ်ဆိုရုံနဲ့ ရပ်တန့်မနေပါနဲ့။ ပြီးတော့ဒီလို မတရားမှုတွေလုပ်ပြီး တရားဥပဒေကို ငွေနဲ့ပေါက် ။ ပြီး ပြီးရော လုပ်တတ်တဲ့ မတရားဥပဒေတွေကိုပြင်ကြပါ။
All must see the decision of Justice . After that must see up to end.
ကုလားသူဋ္ဌေးတွေ ငွေထုပ်ပိုက်ပြီးလိုက်လို့ကတော့ သူတို့ပါသေဒဏ်ချပစ်။
တောက်……….. ခုတစ်လော ရွာထဲကို ဘယ်ရွာထဲကနွားတွေဝင်ဝင်လာပြီး နီနီနေလဲမသိဘူး…. Comment ကောင်းလေးတွေဖက်ရတာ အရသာပျက်တယ်ကွာ….. ဘယ်ကနွားတွေမှန်းကိုမသိဘူး…… ( သဂျီးက နီလည်းဘာ Effect မှမရှိပါဘူးဆိုလို့ ဒီလောက်ပြောတာ… Effect သာရှိရင် ဒိထက်ပိုမိမလားပဲ )
တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ ငါ…မ သားတွေ
သေဒဏ်မပေးခင် ဒီကောင်တွေဟာကို ခုတ်ဖြစ်ကွာ..
မြန်မာအမျိုးသမီး ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရလို့ မကျေမနပ်ဖြစ်လို့ ရေးနေကြတာကို
ဘယ် အကောင်တွေက အနီလိုက်ပေးနေလဲ …
အနီမှ 13 ခု 14 ခု ၊
ဘာလဲ အသတ်ခံရတာ ၀မ်းသာနေလို့ လိုက်နီနေတာလား
တစ်ခု နှစ်ခု ဆိုရင် မပြောဘူး …
မဟုတ်ဘူး ကိုမှော်ဆရာရေ…. ခုတစ်လောရွာထဲကို ဘယ်ရွာက “ငနီ” တွေမှန်းမသိ ဝင်လာတယ်….. ဒါပေသိ သူတို့ မြတ်တွေကုန်သွားရင် ပြန်မှာပါ။ မပြန်လဲ ပေါ်ရောင်းတဲ့သူလက်ထဲ သူ့အလိုလိုရောက်သွားလိမ့်မယ် အကိုရေ…. စကားပြောမှာ “အချိန်” ….. “အချိန်”
တရားခံတွေကို တရားဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ၏။
တရားဥပဒေနဲ့အညီဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါပြီဗျာ …
မိန်းကလေးခင်မျာ အသတ်မခံရခင် သုံးယောက်ဝိုင်း မုဒိန်းကျင့်ခံရ …
မတော်ရာ ဒါးနဲ့ မွှန်းခံရ … နားရွက်ဖြတ်ခံရ ..
ဒါးနဲ့ထိုးခံရလို့ မသေမရှင် ဖြစ်နေတုန်းမှာများ မုဒိန်းအကျင့်ခံရသလား မပြောတတ်ပါဘူးဗျာ …
နောက်ဆုံးကျမှ လယ်ပင်းကို ဒါးနဲ့လှီး အသတ်ခံလိုက်ရရှာတယ် …
သူများကို လုပ်တုန်းက ဒီလို လုပ်ခဲ့ပြီး ဒီကောင်တွေ ခံအလှည့်ကျမှ ၃ စက္ကန့်အတွင်း သေမယ့်နည်း ကြိုးပေးသတ်ခံရမယ်ဆိုရင်
မကျေ …. မကျေ…. လုံးဝ မကျေ ဗျာ ….
ထွက်ပြေးခိုင်းပြီး လူထုလက်ထဲကိုသာ အပ်လိုက်စမ်းပါဗျာ ….
အမှန်ကိုရေးတာ ဘယ်သူတွေက ကြားထဲကနေလိုက်နာနေပြီး ရဲရဲတောက် အနီတွေ ဒီလောက်တောင်ပေးနေကြတာလဲ …
ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ထိခိုက်တယ်။ အခုလူတွေကို သတ်ပါ…မသတ်ပါနဲ့..ကျွန်တော် မပြောချင်တော့ဘူး။ အခုဖြစ်ပျက်မှုက…မုဒိမ်းကျင့်မှု..လူသတ်မှုတင်မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာ လူမျိုးကိုစော်ကားမှုပါဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် စိတ်ရှိလက်ရှိစော်ကားတယ်။ စိမ်ပြေ နပြေ သတ်တယ်။ ကျကျနန ဗွီဗွီဒီယို မှတ်တမ်းတင်တယ်။ သူတို့ အသိမှားပြီး ခဏလေးကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူး။ ယုတ်ယုတ်မာမာ ကို စော်ကားတာ….မိန်းကလေးကို စော်ကားတယ်လို့ မမြင်မိဘူး။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုစော်ကားတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ သတ်ပါ….မသတ်ပါနဲ့လို့ မပြောချင်ဘူး။ နောင်ကို ဒီလိုမဖြစ်အောင်…အတိအကျ ဘယ်လိုလုပ် မလဲ……သေသေချာချာလုပ်ဖို့…လူကြီးများကိုတောင်းဆိုပါရစေ….
အောက်မှာ.. ယူအက်စ်ရဲ့.. မူရင်းနေထိုင်သူတွေ(နေးတစ်အင်ဒီးယန်းတွေ)အကာအကွယ်ပေးတဲ့.. အပြင်ကလာသူတွေစစ်ဆေးခွင့်ရှိတဲ့.. ဥပဒေတချို့..အကြောင်းအရာတချို့.. ရှာတင်ပေးထားပါတယ်.
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ.. ရခိုင်ပြည်သားတွေအထူး.. အကာအကွယ်ပေးတဲ့.. . ဥပဒေတွေထုတ်ပေးစေချင်ပါကြောင်း..
“I intend to sendaclear message that all of our people â€” whether they live in our biggest cities or our most remote reservations â€” have the right to feel safe in their own communities, and to raise their children in peace, and enjoy the fullest protection of our laws.”
Remarks Before Signing the Tribal Law and Order Act
“This Administration is taking concrete steps to redefine the governmentâ€™s relationship with Native Americans. By working together, by using every tool at our disposal, by facing up to hard truths and by refusing to ever back down or give up, we can makeareal difference â€“ and we will.”
I have made the Civil Rights of American Indiansapriority for the Civil Rights Division. For far too long Native Americans have experienced discrimination and injustice, and the federal government can and must stop such discrimination.”
– Assistant Attorney General Thomas Perez
The Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act (introduced as Arizona Senate Bill 1070 and thus often referred to simply as Arizona SB 1070) isalegislative Act in the U.S. state of Arizona that at the time of passage was the broadest and strictest anti-illegal immigration measure in recent U.S. history. It has received national and international attention and has spurred considerable controversy.
U.S. federal law requires all aliens over the age of 14 who remain in the United States for longer than 30 days to register with the U.S. government, and to have registration documents in their possession at all times. The Arizona Act additionally makes itastate misdemeanor crime for an alien to be in Arizona without carrying the required documents, requires that state law enforcement officers attempt to determine an individual’s immigration status duringa“lawful stop, detention or arrest” when there is reasonable suspicion that the individual is an illegal immigrant, bars state or local officials or agencies from restricting enforcement of federal immigration laws, and cracks down on those sheltering, hiring and transporting illegal aliens. The paragraph on intent in the legislation says it embodies an “attrition through enforcement” doctrine.
ဥပဒေအရကတော့ ကျူးလွန်တာမှန်ရင် သေဒါဏ်ပေးရမယ်။
တရားမျှတ သွားတယ်လို့ လဲ ကျုပ်မယုံကြည်ဘူး…။
လုံလောက်သွားတယ် လို့လဲ ကျုပ်မယုံကြည်ဘူး…။
လုပ်စရာပြီးပြီ ကုန်ပြီလို့လဲ ကျုပ်မယုံကြည်ဘူး…။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ကျုပ်တို့လူမျိုး ကို အခြားအရာက အလုံအလောက်အကာအကွယ်မပေးရင်
ကျုပ်တို့ကိုယ် ကျုပ်တို့ ကာကွယ်ရမယ်..။
ကျုပ်တို့ကိုယ် ကျုပ်တို့ ကာကွယ်ချင်ရင်- ကျုပ်တို့စည်းလုံးမှရမယ်..။
ဒါလည်းမှန်ပေတာပဲ။ လုပ်ပါလေ။ မြန်မာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးစည်းလုံးရေ။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားထိရင် မခံဘူး။ မထိအောင် ထ်ိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မယ့် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ဖွဲ့ကြပါ။ တကယ်လည်းအလုပ်လုပ်ကြပါ။ တို့များလည်း တတပ်တအားပါဝင်ပါ့မယ်။
ရွာသားတွေ ရခိုင်သွားကြမယ် … ဘယ်သူတွေလိုက်ဦးမလဲ .. ဘဂ်လားဒေ့မှာလဲ အခြေအနေမကောင်းဘူး .. အရေးကြီးရင်သွေးနီးရမယ်လေ ….
အမ် . . ဂယ်သွားမလို့လား . .
လက်ချည်းသက်သက်တော့ သွားရဲဘူး . .
ဗီဒီယို ထဲကလို အီကွေးမင့် အစုံနဲ့တော့ ဖြစ်ချင်တယ် . .